स्वास्थ्य Archives · sankhuwasavaonline
चितवन : विपि कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल भरतपुरमा बिरामीको उपचारका लागि चिनबाट विशेषज्ञ डाक्टरको नयाँ समूह आएको छ । अस्पतालले नयाँलाई स्वागत गर्दै पुरानो टिमलाई बिदाई गरेको छ। अस्पतालले एक भब्य कार्यक्रमको आयोजना गरि १० औं टिमलाई बिदाई तथा ११ अौं टिमलाई अस्पतालमा स्वागत गरेको हो । भरतपुरमा क्यान्सर अस्पताल स्थापनादेखिनै चिन सरकारले त्यहाँबाट १७ जना बिशेषज्ञ चिकि...
सामान्य अर्थमा कोही कसैसंग गरिने यौन व्यवहार व्यक्तिको कन्ट्रोलभन्दा बाहिर जानु नै सेक्स कुलत मानिन्छ । यस्तो लत बसेका मानिस अधिकांश समय सेक्सकै बारेमा सोचेर बिताउँछन् । अश्लील फिल्म वा साइट हेर्नु उनीहरूको दिनचर्या नै बन्न सक्छ । यसले मानिसको व्यवहारमा समेत परिवर्तन आउन थाल्छ । यसको असरले व्यक्तिगत, पारिवारिक र सामाजिक जीवन नै अस्तव्यस्त हुनपुग्छ । सेक्सले कुलतको रूप लियो भने ...
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महाराजगञ्जस्थित मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरले बनाउन लागेको नयाँ एनेक्स भवनको शिलान्यास गर्नुभएको छ । ३० करोड रुपैयाँ लागतमा बन्न लागेको मुटु रोग उपचारको उक्त सेन्टरमा हाइब्रिड अप्रेसन थिएटर सहितको हुने छ र विशिष्ठको समेत मुटु रोगको उपचार हुने छ । हाल एक सय बेड क्षमताको उक्त सेन्टरले ४० बेडको नयाँ भवन...
ओखलढुंगा । अधिकांश अविवाहित महिला गर्भपतन सेवा लिन गरेको पाइएको छ । सोलुखुम्बुको जिल्ला अस्पताल फाप्लुमा गर्भपतन गर्न आउनेमा अविवाहित र कम उमेरका महिलाहरुसमेत रहेका छन् । एक १३ वर्षीया बालिकाले समेत गर्भपतन गराएकी अस्पतालले जनाए । एक महिनामा सय जनासम्मले वैधानिक रुपमा गर्भपतन गराएका जिल्ला अस्पताल फाप्लुका मेडिकल अधिकृत डा. राजेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिए । जसमा विद्यालय तथा ...
भुटेको मकैले तपाईलाई खाँदा स्वाद मात्रै दिने छैन्, स्वास्थ्यलाई फाईदा पनि पु¥याउने छ । हामीले मकै भुटेर खाँदा हुने केही फाईदाहरु यहाँ उल्लेख गरेका छौँ । १। भुटेको मकैमा फाईबरको मात्रा अत्यधिक हुन्छ । यसले पाचन प्रणालीमा सुधार गर्छ । भुटेको मकै खाने मानिसलाई एसिडिटी र कब्जियतको कहिल्यै समस्या हुदैन् । २। भुटेको मकैमा आइरन, कपर, र फस्फोरस र म्याग्नेसियमको मात्रा प्रर्याप्त ...
अल्जाइमर्स रोगको खतरा वैज्ञानिकहरुका अनुसार रातो मासुबाट प्राप्त हुने एमिलोइड नाम गरेको प्रोटिन दिमागमा जम्मा हुने हुँदा यसले स्नायुकोषलाई हानि गर्छ । मासु खानेलाई अल्जाइमर्स रोगको बढी सम्भावना हुन्छ । त्यस्तै, आइरनको मात्रा अत्यधिक भयो भने पनि यो रोगको खतरा हुन्छ । पछिल्लो पटक गरिएको एक अध्ययनमा अल्जाइमर्सका बिरामीको दिमागमा अत्यधिक मात्रामा आइरनको मात्रा संग्रह भएको थिय...
बाबियाचौर, म्याग्दी, १५ फागुन- म्याग्दीको बेनी अस्पतालको औषधि वितरण कक्षका स्वास्थ्यकर्मीले आइरन चक्की दिनुपर्ने गर्भवती महिलालाई जुकाको औषधि (अल्वेण्डाजोल)को बट्टा दिएको खुलासा भएको छ । विसं २०७४ मंसिर ४ गते अस्पतालमा गर्भपरीक्षण गराउनुभएकी बेनी नगरपालिका–५ सेतोढुङ्गाकी समीक्षा खत्री कुँवरलाई सोही दिन औषधि वितरण कक्षमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीले अल्बेण्डाजोलको बट्टा दिएका थिए ।...
कुष्ठरोगका ८८ नयाँ बिरामी फेला
नवलपरासी, १५ फागुन | नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्ता पश्चिम) र नवलपरासी (बर्दघाट –सुस्ता पूर्व ) जिल्लामा कुष्ठरोग उन्मूलनका लागि गरिएको ‘सर्च अभियान’ मा कुष्ठरोगका नयाँ ८८ बिरामी फेला परेका छन् । खोजी अभियानअन्र्तगत नवलपुर क्षेत्रमा १६ र परासी क्षेत्रमा ७२ बिरामी पहिचान भएका हुन् । नवलपुर र परासी क्षेत्रका १२ स्थानीय तहमा कुष्ठरोगका बिरामी पत्ता लगाउन सञ्चालन गरिएको अभियानबाट कु...
होसियार ! मोबाइल रेडियसनले हुनसक्छ क्यान्सर ?
हामीले बोक्ने मोबाइल फोनका गुणबारे धेरैलाई जानकारी छ । तर, यसबाट निस्किने रेडियसनले कति नोक्सान गर्छ ? के मोबाइल फोनको रेडियसनले ट्युमर हुने खतरा हुन्छ ? यसबाट कसरी बच्ने ? आदि विषयमा धेरै वैज्ञानिक लामो समयदेखि अनुसन्धानमा छन् । तर, अहिलेसम्म यस अनुसन्धानको तथ्यपरक निक्र्योल भने निस्किन सकेको छैन । तर, रेडियो फ्रिक्वेन्सी वेभ ‘नन आओेनाइजेसन’ रेडिएसन हो, जो एक्स–रे र ‘अल्ट्रावा...
स्तन शिशुका लागि दूध बनाउनमात्र होइन, यौनका दृष्टिकोणले पनि महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो । किशोरावस्थामा पुगेपछि हार्मोनको प्रभावले युवतीहरूमा स्तनको विकास तीव्र गतिमा हुन थाल्छ । स्तनको वृद्धि धेरैजसोमा ११ वर्षको उमेरमा सुरु भएर १५ वर्षमा पूरा हुन्छ । स्तनको आकार तथा आकृतिको महिलाको मानसिकतामा महत्वपूर्ण प्रभाव हुन सक्छ । स्तनसँग आत्मसम्मानको कुरा पनि जोडिएको हुन्छ । यसको आकार वा आकृत...